Medina waxay raadinaysay bilow cusub - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Madina oo 22 jir ah waxaa khasab ku noqotay in ay ka tagto magaaladeedii sababtoo ah waxaa magaalada ka talinayey ururka Al-shabaab. Waxay go’aan ku gaartay in ay magaalada isaga guurto ayna raadsato meel kale oo ay ku badbaado iyo in ay hesho nolol cusub.
“Waxaan u xirnaa Al-shabaab 15 beri, taas ayaana keentay in aan ka soo tago magaalada. Ma sii joogi karin, waxaana u baqay naftayda”.
Madina Waxay raadinaysay nolol ka wanaagsan midda ay haysatay, waxayse dhibaatadii ugu badnayd kala kulantay safarkii saxaraha. Waxay la kulantay jirdil, kufsi iyo tacadiyo kale oo mukhalisiinta u geysteen;
“Waxaan safar ku jiray 3 bilood … wax cunto lama siin jirin, waana la i kufsaday. Qof i caawiyey ma jirin. Waad dareemi kartaa gabar aan waalidkeed la socon oo u gacan gashay dad shisheeye ah. Dadkani cid ay ka cabsanayaan ma jirto, gabdhaha meel ayey ku xirtaan waxayna u geystaan faro xumeeyaan iyo jirdil”.
“Waxaa nala geliyey xero. Ragga iyo dumarka waxaa lagu kala xereeyey laba meelood. Nin ayaa noo iman jiray oo na garaaci jiray mar walba. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dagaal ka dhex dhacay mukhalisiinta iyo dadkii ay haysteen. Wiil dhalinyaro ayaa bartii lagu toogtay. Wiilal isku dayey in ay cararaan iyagana waxaa lagu furay rasaas.
Madina noloshii ay u malaynaysay in ay yurub ka helayso waxay noqotay mid ka duwan tii ay filaysay. Saddex bil markii ay joogtay yurub waxay weli sugaysaa in lala yeesho waraysigii qaxootimo iyadoo aan la ogayn in codsigeeda magan gelyo la aqbali doono iyo in kale.
“Waxaan filayey in aan yurub ka helo magan gelyo waxa aan kala kulmayna ma ahan wax aan filayey. Xerada qaxootiga ee aan ku jiro waxaa ka buuxa dad Soomaali ah. Yurub kama helin magan gelyadii aan ka filaynay. Haddii aanan ku badbaadi karin dalkeenii ma ku laaban karo …. Haddii aan dalkeenii ku laabano waxaan la kulmaynaa jirdil ama xataa in nala dilo. Runtii ma garanayo si xaal noqon doono waxaa qabnaa dhib badan. Halkaan waxaan ku suganahay 3 bilood wax waraysi ah la ilama yeelan…. Qaxootinimo warkeedaba daa”.